Izvo zvigadzirwa zvinoshanda zvido zvehutano zvehuwandu. Sekureva kweWHO, zvigadzirwa izvi zvinofanirwa kuve zviripo “nguva dzese, mune zvakakwana, mafomu ezvipimo akakodzera, aine chokwadi chakakwana uye ruzivo rwakakwana, uye nemutengo munhu uye nharaunda vanogona”.
Iyo bay-mhando clamp
10mm American mhando hose clmp
Chigadzirwa chacho chinoshandisa bhanhire resimbi kuburikidza-negomba kuita kuti zvaro zviyero zvinyatso kubatanidza bhandi resimbi.
Zviri nyore kushandisa, inogona kutemwa chero kureba.
12.7mm American Set
Huru yeAmerican hose clamp band yemukati mhete
Iyo hombe yakakura yeAmerican hose clamp bhendi nemhete yomukati ine zvikamu zviviri zvakakosha, iyo yakakura yeAmerican style hose clamp uye corrugated yemukati mhete. Iyo mhete yemukati yakagadziriswa yakanyatsogadzirwa neyakaonda yehuremu hwesimbi isina tsvina kuti ive nechokwadi chekuisa chisimbiso uye kusimba.
Constant torque clamp
MaConstant torque clamp ane maviri mhando dzebandwidth, ayo ari 14.2mm uye 15.8mm, 14.2mm bandwidth ine mana maviri epirasitiki mapads, uye 15.8mm bandwidth ine mashanu pairs epirasitiki mapadhi.
American nekukurumidza kuburitsa hose clamp
IAmerican yekukurumidza kuburitsa hose clamp bandwidth ndeye 12mm uye 18.5mm, Inogona kuiswa mushe kumapurogiramu akavharwa ayo anofanirwa kuvhurwa kuti aiswe.
14.2mm American mhando hose clamp
Iyi clamp iyi yakavandudzwa yemaitiro akajairika eAmerica maitiro, ane bandwidth ye14.2mm, uye simba rayo rakakwirira kupfuura iro rakajaikwa reAmerica maitiro.
12.7mm yeAmerican mhando hose clamp ine mubato
12.7mm yeAmerican mhando hose yekupfiga nemubato yakafanana neiyo 12.7mm American mhando hose clamp. Iyo yakagadzirwa nehupfumi hwekuomesesa zvinhu, asi pane chekuwedzera chibatiso pane screw. Chibatiso chine mhando mbiri: simbi nepurasitiki.Ruvara rweganda rinogona kushongedzwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
12.7mm yeAmerican mhando hose clamp
Iyi clamp yakagadzirwa nehupamhi hwekuomesesa zvinhu, inogona zvakare kugadzirwa zvinoenderana nehukuru hunodiwa nemutengi.Kune mhando mbiri dzezvakakora: zvakajairwa uye zvinorwisa-kudzoka.
8mm American mhando hose clamp
Iyo diki yeAmerican clamp ine imwechete bandwidth ye8mm.Iyo ndeyakareruka masitepisi, ingoda 2,5NM yekukwira torque. Iyi clamp inogona kupa yakavimbika uye yekushandisa kusingaperi, inogona kupa yakakwirira yekumanikidza kusaina. Masikono acho ane matanhatu uye matanhatu ma3.
American mhando inorema mutoro basa
American mhando inorema mutoro dhorobhodhi chigadzirwa chine bandwidth ye15,8mm uye inorema ina-makona mana evhavha dhizaini iyo inogona kuendesa yakanyanya kusimbisa simba kune simbi yebhandi nemapendero. Pamusoro pehukuru hwayo patafura, inogona zvakare kuvezwa maererano nehukuru hunodiwa nemutengi.